Dood cilmiyeed loogu tala galay xuska maalinta qoomiyadah iyo shucuubta dalka itoobiya oo ka dhacday hoolka shirarka ee S.MCX. - Cakaara News
Dood cilmiyeed loogu tala galay xuska maalinta qoomiyadah iyo shucuubta dalka itoobiya oo ka dhacday hoolka shirarka ee S.MCX.
Dood-cilmiyeedkan maanta oo loogu talagalay xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka itoobiya oo Maalinta Berito ah Dhamaan loo wada suxul-duubi doono xusitaankeeda ayaa lagu qabtay Dood-cilmiyeed ay siwada jir ah u soo diyaariyeen golaha fadareeshinka JDFI iyo xukuumada DDSI.
Dood-Cilmiyeedkan ayaa waxay ujeedadiisu ahayd sidii loo soo bandhigi lahaa sooyaalkii taariikheed ee uu Deegaanku soo maray,xidhiidhkii murugsanaa iyo aragtiyadii qaloocnayd ee ay inagu reebeen nidaamyadii keli-taliska iyo waxa xukuumada DDSI iyo shacabkeedu ka gaysteen sixitaanka mushkiladahaas iyo kaalinta ay ku leedahay dadaalka loogu jiro abuurida dhismaha hal-bulsho leh siyaasadeed iyo mida dhaqaale. Iyo guud ahaanba marxaladihi kala duwanaa ee uu deegaanka soomaray iyo halka uu hada marayo.
Waxana ka soo qaybgalay dood cilimiyeedkaa afyaheenka baarlamaanka JDFI mudane abaadhuule gamadhe, afhayeenka golaha fadareeshinka JDFI mudane kase tegle burhan, madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar, wasiiro heer fadaraal iyo kuwa deegaanka afhayeenada 9ka deegaan iyo waliba marti sharaf kale.
Madaxwaynah DDSI mudane cabdi maxamuud cumar oo ugu horayntii ka hadlay dood cilmiyeedkaa ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay islamarkaana ay xukuumada ddsi iyo shacabkooduba siwayn u soo dhawaynayaan martida qimaha badan ee ka socota dhaman deegaanada iyo JDFI wuxuuna madaxwaynuhu siwayn uga waramay soonyaalka taariikheed uu soo maray deegaanku iyo heerka uu maanta taagan yahay.
waxaa u sheegay madaxwaynuhu in ay dood cilmiyeedka ay aqoonyahana u dhashay deegaanku ku soo dhandhigidoonaan qoraale ka hadlayay heerarka kala duwan ee taariikheed oo ku qotoma marxaladaha deegaanka ka jirayay, hagartaamadii iyo tiiftii ay deegaanka u gaysteen xukuumadihii hore.
Dhanka kale waxaa isaguna ka hadaly dood cilmiyeedkaa afhayeenka golaha fadareeshinka mudane kase tegleh burhaan oo sheegay in shacabka iyo xukuumada DDSI ay maanta u tahay maalin qiimo badan maadaamo oo buu yidhi ay maanta xarunta deegaanka u suganyihiin dhamaan qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan dalka itoobiya iyo masuuliyiinta dalka itoobiya kuwaas oo maanta ka qaadanaya aqoon ayna hore ugu lahayn deegaanka.
Sidoo kale waxaa isaguna ka hadlay afhayeenka baarlamaanka JDFI mudane abadhule gamadhe oo sheegay in uu siwayn ugu faraxsan yahay xuskan qiimaha badan ee maalinta qoomiyadha oo markii 8aad lagu xusayo xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga. In deegaanka sanadihii ugu danbeeyay ku talaabsaday horumar siwayn u taam yeelay taasi oo keentay in ay maanta qoomiyadaha dalka itoobiya oo dhami imaayaan xarunta jijiga,Dood cilmiyeedkan ayaa waxaa qoraalo ka akhriyay aqoonyahano ka socday dhinaca xukuumad iyo khabiirka socday jaamacada jijiga qoraaladaasi oo ka hadlayay muuqaalka guud ee deegaanka, cadaadiskii qoomiyadeed ee nidaamadii hore ku soo hayeen shacabka deegaanka halgalkii uu shacabka deegaanku galay iyo guulaha laga soo hooyay.
Dhanka kale waxaa maanta xadhiga laga jaray carwo bandhigeedka horumarka dawlad oo lagu soo bandhigayo wax qabadka ay horumarineed ee ay xukuumada JDFI iyo kuwa deegaanaduba gaadheen waxaana carwadaa siwad jir ah xadhiga ug jaray madaxwaynah DDSI mudane cabdi maxamuud cumar iyo afhayeenka golaha fadareeshinka kase tagleh burhaan, waxayna furitaankii ka dib ku soo wareegeen masuuliyiintani qaybaha ay carwadani ka kooban tahay iyo waxyaabaha ay soo bandhigeen deegaanadu iyada oo dawlad deegaankastaaba ay soo bandhigasay guulaha horumarineed ee ay mudadii 22ka sano ayad soo hooyeen